Amin'ny teny frantsay sy amin'ny maha iraisam-pirenena ny mpivady, fitiavana - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Amin'ny teny frantsay sy amin'ny maha iraisam-pirenena ny mpivady, fitiavana
Toy izany koa, mazava ho azy, ny teny frantsay ny vehivavy
Miaraka amin'ny faritra mihoatra noho ny antsasaky ny tapitrisa kilometatra toradroa, Frantsa no firenena lehibe izay efa voaisy tombo-kase eny Eoropa avy any amin'ny ranomasimbe AtlantikaNa dia ny firenena efa nanafika ny mpampihorohoro ao amin'ny toerana maro isan-karazany nandritra ny roa taona farany, dia tsara ny alalan ny miaramila sy ny polisy. Mety ho marina fa ny teny frantsay toy ny fotoana tsara sy mahafinaritra, fa izy ireo ihany koa ny be pitsiny sy cultured sy hitondra ny mikasika ny haja ny fifandraisana. Izany no tena zava-dehibe ny antony maro dia maro ny vehivavy Amerikana dia mitady lehilahy eto amin'ity firenena ity, na dia izany fandresen-dahatra mihatra amin'ireo vehivavy avy amin'ny Fanjakana ihany, New Zealand, Rosia, sy Eoropa Atsinanana. Ankoatra izany, ny Frantsay no mitondra tena tsara, ary, toy ny fitsipika, azo am-pifaliana miasa, izay midika fa izy dia ho afaka foana ny mahay mandanjalanja eo amin'ny fifandraisana rehetra.
Avy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ho fanampiana amin'ny isan-andro mihazakazaka ny trano, izany dia afaka ny ho tonga lafatra ny mpiara-miasa na inona na inona lehibe ny olona.
Izany no tena mampiavaka olona avy any an-drenivohitra any Paris, fa koa ho an'ny olona izay mipetraka amin'ny tanàna kely. Koa, ao an-trano ao an-dakozia na mikasa amin'ny fitetezam-paritra Provence, ny frantsay mpiara-miasa dia ho niaraka eo amin'ny lafiny rehetra mba hiatrehana ny fifandraisana lehibe. Ary satria izy efa zatra ny fomba amam-panao eto amin'izao tontolo izao, izy dia ho faly hifanakalo hevitra na inona na inona lohahevitra ary tsy matahotra ny hanasongadinana misy hevitra na soso-kevitra na inona na inona endri-javatra fanampiny mba hanamafisana na hanamafisana ny fifandraisana eo aminao. Na dia ny teny frantsay no teny iraisampirenena, ny teny frantsay dia mety ho resy lahatra ny miresaka amin'ny teny anglisy, ka ny fifandraisana dia tokony tsy ho olana.
Raha ny sasany dia mety mieritreritra fa ny frantsay lahy loatra ny manify sy tsy toby fanazarana, ny zava-misy dia mampiseho ny mifanohitra amin'izany.
Tsara izy ireo akanjo sy mikarakara ny tenany, tahaka ny ankamaroan'ny olona any amin'ny firenena hafa. Nandritra ny taonjato lasa, Frantsa nampiantrano faobe ny fifindra-monina, izay efa nitarika ny vahoaka frantsay mandray ny kolontsaina marolafy fomba fiainana.
Noho izany, ny fitsidihana ity firenena ity dia hampiditra anao any amin'ny global afangaro ny zom-pirenena, indrindra izay manaiky ny vaovao ankehitriny fomba fiainana, izy ireo dia mitahiry ny fomba amam-panao sy mitondra hevi-baovao ity firenena taloha.
Matetika, ny tanora ao Frantsa dia nitso-drano amin'ny mahazatra Eoropeana fahalalam-pomba. Misokatra mba hiresaka momba ny olana amin'izao fotoana izao fa dia toy ny tantaram-pitiavana rehefa tonga ny fotoana, mba miangavy re ny vadiny. Ary izany dia ireo fotoana sarobidy izay manome azy ireo loatra ny fahafinaretana, indrindra fa ny miadana, oroka mamy fa hanome ho an'ny vehivavy. Tonga izany fahatsapana izany avy ny lova ara-kolontsaina, ary dia nanamafy ny fomba voajanahary ny maha namana sy misokatra. Ny namana toetra manampy azy ireo hanao ny fifandraisana vaovao isan-kerinandro. Ohatra, nivoaka ho zava-pisotro dia ny tena fomba voajanahary mba ho namana vaovao. Araka ny voalaza etsy ambony, ny frantsay dia afaka mianatra momba ny kolontsaina sy ny fanatanjahan-tena, ary koa mandray anjara amin'ny zavatra maro hafa koa ny hetsika. Amin'ny lafiny hafa, izy ireo ihany koa ny te-hampiasa ny tambajotra sosialy toy ny Pinterest, Twitter, Facebook ary ny mampiasa ny Google be. Indrindra ny teny frantsay ihany koa ny olona toy ny mandeha, ary ny sasany ireo malaza indrindra dia ny toerana dia hita any Amerika ary eo amin'ny tanàn-dehibe toa an'i new York, Los Angeles ary New Orleans. Amerika dia malaza satria maro ny vahoaka frantsay sy ny olona tahaka ny daty sy ny daty vehivavy Amerikana. Izy ireo ihany koa ny te-hitsidika ny Fanjakana Ihany, indrindra tany Londres, ary akaiky kokoa ny tenin Italia, izay toy ny manao namana Italianina noho ny hafanana ny natiora.
Indraindray izany dia nilaza fa ny frantsay lahy mieritreritra be loatra, izay sarotra takarina avy amin'ny fomba fijerin'ny any ivelany.
Indraindray dia mila ny andro vitsivitsy ho tony ianao, raha tsy tena vonona ho lehibe resaka. Toy ny fitsipika, ny Frantsay dia ao anatin'ny toe-po tsara amin'ny daty, nankafy ny fotoana tsara na karazana fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fianakaviana na namana, ary indrindra fa rehefa manana fotoana amin ny vehivavy ny safidy. Entanim-pitiavana, mampihomehy ary indraindray adala, ny frantsay, ny olona tsy te-tsaina ny Fiarahana Amerikana latinina brunette.
Na dia eo aza ny zava-misy fa mety, raha toa ka tsy hitsena azy, dia azo antoka fa ny daty voalohany ianao dia ho tsara, tantaram-pitiavana sy amim-panajana.
Koa, toy ny ankamaroan'ny ankizilahy, tiany ny mihinana tsara, ka tamin'ny fotoana sasany dia mety ho hevitra tsara ny seho eny ny fandrahoan-tsakafo ny fahaiza-manao.
Raha misy olona milatsaka amin'ny fitiavana, amin'ny vehivavy, dia miezaka foana ny tsara indrindra.
Raha nanangana ny mombamomba azy ao amin'ny Mampiaraka toerana, dia izy no ho ilay iray izay manao ny marina sy misokatra. Aza adino ny mitondra divay iray siny hoditra rehefa mihaona ny vondrona Frenchmen ary aza manahy, ny frantsay dia mazava ho fiarovana sy ny famaizana. Na dia misotro divay no mampiavaka ny frantsay, izay tena zara raha misotro be loatra, dia mahita izany tsy fanajana ho mamo. Raha toa ianao te hiaraka olona avy amin'ny firenena lehibe, hisokatra ary aza hadino velively fa ny tsirairay dia samy hafa sy ilain'ny hafa. Ny manan-karena ny lova ara-kolontsaina mahatonga ireo olona toy izany mahaliana namana sy mpiara-miasa lehibe. Rehefa mihaona ny Frantsay, ataovy azo antoka fa ianao no mahafantatra ny liana, satria indraindray ny heviny mirona mirenireny any an-kafa. Raha fahasamihafana ara-kolontsaina ho ny frantsay malina momba ny Mampiaraka, dia mety ho hevitra tsara ny hanome azy ireo fotoana eny.
Mankafy ny sakafo, hihaona ny namana sy ny voly raha mbola mijanona miara.
Tsy misy maharatsy ny maha-pitiavana ho azy, raha sy rehefa nanoroka azy aho, dia nanoroka azy. Mirary anao ho tsara vintana.
Fivoriana Ao Shina. Boligara vaovao fantsona No
Менән танышыу өсөн сайтында танышырға була ҡатын-ҡыҙ бушлай житомир өлкәһе
Aho te hihaona aminao tsotsotra lahatsary Mampiaraka kisendrasendra chat Chatroulette online dokam-barotra ny vehivavy te hihaona aminao hivory hiaraka ny lehilahy Fiarahana tsy misy fisoratana anarana amin'ny sary ny fomba hitsena ny tovovavy ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana